ဖူးနုသစ်: ပန်းရောင် နဲ့ အပြာရောင်
Posted by ZT at 3:09 AM
ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ ခေါင်းချဖို့ စဉ်းကိုမစဉ်းစားဘူး
အပြာလဲ မကိုင်ဘူး ပန်းရောင်လည်း မကိုင်ဘူး ခုတော့ အစိမ်းပဲ ကိုင်ထားတယ်
မွေးတဲ့နေရာလေးတော့ ခေါင်းသွားပြန်ချချင်မပေါ့ :)
ဟုတ်တယ်..ဒီနိုင်ငံမှာ အသက်ထက်ဆုံးနေမယ်လို့တော့ တစ်ခါမှမစဉ်းစားဘူး
ပန်းရောင်ကဒ်၊ အပြာရောက်ကဒ်၊ ပီအာရ်၊ တတိယနိုင်ငံကူးဖို့ ။ အင်း အင်း ဒါတွေမှတ်သားသွားပါတယ်။
I don't think you cann't stay in Burma more than 1 yr because...... .
idea တူတူပဲ။ ထောက်ခံတယ်။
Yes I agree with you, even our country so bad. One day we have to go back to our homeland and pleasure through the life untill 'last leaves'. Anyway now we earn more money in s'pore and try to save for our feature (as s'pore gov. policy), then we can do something our last minute.
ဘယ်သူတွေဘာပဲပြောပြော၊ ဘာတွေပဲလုပ်လုပ် မြန်မာဟာ မြန်မာပါဘဲ။
မြန်မာစစ်စစ်မဟုတ်ပေမယ့် ကျမကတော့ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်။
ကျမလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Myammar passport တော့ မစွန့်လွှတ်နိုင်သေးဘူး။
လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်အယူအဆနဲ ့ကိုယ် ပါပဲ။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း ထပ်တူကျချင်တဲ့သူတွေပါပဲ။ ပြီးတော့ အဆင်ပြေမယ့်နေရာဆီမှာ ဘဝကို ရပ်တည်ချင် ကျတဲ့သူချညး်ပါပဲ။
မြန်မာပြည်ကြီး မကောင်းလို့ကောင်းတဲ့ နေရာတွေကို တိုးဝှေ ့ဝင်သွား ကျတဲ့သူတွေကို ဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘူး။ တခုပါပဲ ကိုယ့်လူမျိုးကို ပိတ်အထူနဲ့မပိတ်ခဲ့ဖို ့ပါဘဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဇာပဝါလေးလိုခြားထားပေမယ့် ကိုယ့်ဇာတိပြည်ကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ကူညီဖို ့ပါပဲ။ ( လွတ်လပ် ဖွံ ့ဖြိုး တိုးတက်ပြီးသည်အထိပေါ့ )
ထို ့အတူ မြန်မာဟာ မြန်မာပဲလို့ခံယူသူများ (ကျွန်တော်အပါအဝင်) ထိုနည်း၄င်း လုပ်ဆောင်ကြဖို ့ပါပဲလို့ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်။
ကို ZT... ဒီ post အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခံယူချက် ကောင်းပါတယ်ဗျာ ... အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စွန့်ခွာခဲ့ရတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း မြန်မာတစ်ယောက်အတွက်တော့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ နွေးထွေးမှု အရှိဆုံး နိုင်ငံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတာပါပဲ ...
ကျွန်တော်လည်း အဲလိုမျိုးကိုပဲ သဘောတူပါတယ်။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဗျ2နိုင်ငံသား ခံယူလို့ ရတာမျိုးဆိုရင်တော့ မဆိုးဘူး။
ဖတ်တာ မနက်တစ်ခေါက် ညတစ်ခါက်။
ur CPF reason isabit irrelevant now :)
6 figure S$ can do nothing in YGN
ကျွန်မနဲ့ စိတ်ကူးတူတယ်.. :).. ကိုသီဟသစ်ပြောသလို ၂နိုင်ငံသားလုပ်လို့ရမယ့်နိုင်ငံမျိုးကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်. :P